Ulwazi Oludingekayo lweZingane Zesifo Sikashukela Iziguli-Isifo Sikashukela-Sinocare
Ulwazi Oludingekayo Lwezingane Zesifo Sikashukela
Isikhathi: 2020-04-10 Hits: 199
Izingane zeziguli ezinesifo sikashukela kufanele zifunde ulwazi oluyisisekelo olulandelayo kakhulu:
1. Isifo sikashukela aselapheki okwesikhashana. Ungakholelwa enkohlisweni yemithi yemfihlo yokhokho, isikhungo sezokwelapha esiphakeme kunazo zonke nemikhiqizo yezempilo engaqondakali. Sicela ugcine lokhu engqondweni!
2. I-insulin ayimilutha. Uma i-insulin ibekwa ngudokotela ngoba izinga lokushukela kwegazi likhulu, kufanele ungamzondi lo dokotela, ngoba ubuthi be-hyperglycemic bungadanjiswa ngokuphathwa kwe-insulin okufika ngesikhathi. Uma i-insulin inikezwa ngesikhathi esifanele, ingahoxiswa. Kodwa-ke, ukuhoxiswa kwe-insulin akubonisi ukuthi isifo sikashukela siyelapheka, kepha kukhombisa ukuthi unempilo ngalesi sikhathi.
Uma ezinye izidakamizwa zibekwa ngudokotela kubazali bakho, hhayi nje ukuthi kufanele zinikezwe ngokuqinile ngokomyalelo wezokwelapha, kodwa futhi nomphumela wazo kufanele ubhekwe ngokucophelela ushukela wegazi. Uma izinga likashukela wegazi lingafiki inani elijwayelekile, kufanele ukhulume ngesikhathi nodokotela, ngoba odokotela abayona inkulunkulu futhi kwesinye isikhathi abakwazi ukuthola imishanguzo efanele yokwelapha lesi sifo. Uma uvame ukuxhumana nodokotela, odokotela bangasizwa ukuthola izisombululo ngokushesha okukhulu.
3. Lapho ushukela wegazi ulawulwa kahle, ungathatha noma yikuphi ukudla, kepha kufanele nokho ulawule inani lawo lokudla.
4. Ukuzivocavoca umzimba kuyindlela enhle yokulawula ushukela egazini. Ukuthuthukiswa komkhuba omuhle wokuzivocavoca umzimba kungathuthukisa kangcono ukuzivikela komzimba, futhi kusize ekulawuleni i-glucose yegazi. Ungakhathazeki ngokuthi yikuphi ukuvivinya umzimba okwenziwayo, futhi vele uvivinye umzimba.
5. Ngokuqapha ushukela wegazi, izinga likashukela wegazi alikwazi ukwehliswa, kepha ungabona ukuthi izidakamizwa nokudla okukhona kunengqondo.
Ukuze basize abazali abanesifo sikashukela ukulawula i-glucose kahle, izingane zabo zingenza izinto ezilandelayo:
1. Thenga incwadi kashukela noma ubhalisele abazali bakho umagazini. Izincwadi eziningi zesifo sikashukela ziyatholakala kwi-Intanethi, njengalezo ezibhalwe nguProfesa uYang Wenying, uProf Xiang Hongding noProf. Wang Jianhua. Lezi zincwadi kulula ukuyiqonda futhi zisebenza; futhi bangasiza abazali bakho ukuba bazi ulwazi oluyisisekelo ekuphatheni ushukela wegazi. Noma ungabhalisela iqoqo lolo lwazi kubazali bakho.
2. Siza abazali bakho ukuba bahlakulele umkhuba omuhle wokuzivocavoca ngokubanika amathuluzi okuzivocavoca, njengezicathulo zezemidlalo, amarokhethi e-badminton, amajazi ezemidlalo / ibhulukwe namalulwane ethenisi.
3. Uma abazali bakho bengasithandi isilwane, unganikeza abazali bakho inja. Lapho abazali bakho behamba nenja ekuseni, bangakwazi kangcono ukwakha umzimba omuhle, futhi ukuzisola kwakho ukuthi ungakwazi ukuhambisana nabo kuzolungiswa, ngoba banomngane othile kakhulu noma omncane (umuzwa odabukisayo).
4. Thenga imitha yoshukela wegazi nemitha yengcindezi yegazi kubazali bakho. Ngomitha weglucose yegazi, abazali bakho bayasizwa ekufundeni izinga likashukela wegazi futhi bazi ukuthi le mishanguzo isetshenziswa kahle nokuthi ukudla kudle ngokufanele yini. Kufanele futhi uthenge imitha yengcindezi yegazi kubazali bakho, ngoba i-hyperglycemia kanye ne-hypertension kuyizifo zakubo futhi kubalulekile ukubheka umfutho wegazi neglucose yegazi. Njengoba zingabizi kakhulu, ungazithenga ngokugwema indawo yokudlela nje.
Ngaphezulu kwamaphoyinti amane afaka izinto zangempela okufanele uzithengele abazali bakho. Ungabheke nxazonke ukuthi yimiphi imikhiqizo yezempilo enganciphisa izinga likashukela wegazi, ngoba izinga likashukela wegazi alikwazi ukwehliswa nganoma yimuphi umkhiqizo wezempilo; uma ukholelwa kuzo, ngokuqinisekile azikufanele ukukhokhelwa. Ngaphezu kwezinto ezi-4 zisebenza kakhulu kunemikhiqizo yezempilo.
5. Uma usekhaya, ungahambisana nabazali bakho xaxa ngokuhamba kwesidlo sakusihlwa. Uma ungekho ekhaya, kufanele uzishayele ezinye izingcingo. Ikakhulu lapho isifo sikashukela sivele satholakala ngokusobala, abazali bakho basengozini, futhi nesikhuthazo sakho siyadingeka, njengoba nje abakukhathalelayo ngenkathi ugula ngaleso sikhathi. Yini ehlukile, ngenkathi ugula, abazali bakho babehamba nawe usuku lonke nobusuku; noma kunjalo, lapho begula njengamanje, awubapheleli (umuzwa othile odabukisayo).
6. Uma abazali bakho abangaxhumani, akufanele ufundise noma ubakhuze. Lapho abazali bakho bengahambisani nokulawulwa kwe-glucose yegazi, ikakhulukazi, abanqikazi, kepha banezinto eziningi ezinjengokukhokha imali eningi kakhulu, ukwesaba izinkinga nezimo ezimbi. Okwamanje, kufanele ucabange ezikhundleni zabo ngokwengeziwe ngemibono yabo yeqiniso.
Ikhasi Langaphambili: Izizathu Ezintathu Ezinokwenzeka Zokuzila Ukuhlolwa Kwe-Plasma Glucose> 7 mmol / L
Ikhasi elilandelayo: Izeluleko Eziphezulu Eziyisikhombisa Okufanele Zenziwe Ngemuva Kokuhlushwa Isifo Sikashukela